Asa tanana atao mianakavy mandritra ny Krismasy | Asa tanana
Asa tanana atao mianakavy mandritra ny Krismasy
Jenny monge | | Asa tanana krismasy, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Salama daholo! Amin'ity lahatsoratra anio ity dia mitondra safidy ho anao izahay asa tanana maromaro tonga lafatra ho an'ny fianakaviana satria ankoatra ny fialamboly dia ahafahantsika milalao avy eo miaraka amin'izy ireo ary manaova fotoana mahafinaritra mandritra ireo fety ireo.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo asa-tanana arosonay?
1 Asa tanana # 1: Custom Who's Who
2 Craft # 2: Bugs an-dalambe
3 Asa tanana 3: Ataovy ny Hoops
4 Asa tanana # 4: Lalao Fitantarana
5 Craft # 5: Lalao fahatsiarovana
Asa tanana # 1: Custom Who's Who
Ahoana ny amin'ny fanamboarana sy filalaovana an'ity mahazatra eo amin'ny lalao board ity?
Azonao atao ny mijery ny dingana amin'ny fanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy apetranay aminao eto ambany: Iza no Lalao manokana
Craft # 2: Bugs an-dalambe
Ho an'ny mifaninana indrindra, ity lalao ity dia hahatonga anao hanana fotoana tsara hifaninana. Ho fanampin'izany dia mahafinaritra ny manao manokana ny kankananao tsirairay.
Azonao atao ny mijery ny dingana amin'ny fanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy apetranay aminao eto ambany: Bugs an-dalambe. Manao kilalao kilalao ho an'ny ankizy izahay
Asa tanana 3: Ataovy ny Hoops
Classic iray hafa izay azontsika amboarina sy ahafahantsika manana fotoana mahafinaritra.
Azonao atao ny mijery ny dingana amin'ny fanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy apetranay aminao eto ambany: Andiana hoops ho an'ny ankizy
Asa tanana # 4: Lalao Fitantarana
Lalao ho an'ny olona misaina indrindra Iza no hilaza ny tantara tsara indrindra?
Azonao atao ny mijery ny dingana amin'ny fanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy apetranay aminao eto ambany: Lalao «Tantarao tantara»
Craft # 5: Lalao fahatsiarovana
Ny lalao tonga lafatra ho an'ireo izay te-hizaha toetra ny tenany sy ny fahatsiarovana.
Azonao atao ny mijery ny dingana amin'ny fanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy apetranay aminao eto ambany: Lalao fahatsiarovana
Ary vonona! Afaka manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny fianakaviana na namana isika amin'izao fety izao. Ny tsara amin'ireo lalao ireo dia ny ahafahantsika mitahiry sy mampiasa azy ireo amin'ny fotoana rehetra tiantsika.
Manantena aho fa ho faly ianareo ary hanao ny sasany amin'ireo asa tanana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Asa tanana atao mianakavy mandritra ny Krismasy
2022 tonga soa fehiloha
Easy Acrylic Autumn Landscape